कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन ५ गते सोमबारको रा’शिफल ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन ५ गते सोमबारको रा’शिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन ५ गते सोमबारको रा’शिफल !
वि.सं.२०७७ साउन -५,सोमवार, ई.सं.२०२० जुलाई -२०,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० दिल्लागा,प्रमादी,दक्षिणायन,वर्षा,श्रावण कृष्णपक्ष तिथि-औंसी , २२:४४ बजे उप्रान्त प्रतिपदा,नक्षत्र-पुनर्वशु,२१:५४ बजे उप्रान्त तिष्य,योग-हर्षण , २१:११ बजे उप्रान्त वज्र,करण-चतुष्पद ११:०४ बजेदेखि नाग , २२:४४ बजे उप्रान्त वालव,चन्द्रराशि-मिथुन,आनन्दादि योग-धुम्र, सूर्योदय-५:२१, सूर्यास्त-१८:५८, दिनमान-३४ घडी ०० पला, व्रत/पर्व-दर्शश्राद्ध, सोमवारे औंसी, हलो तथा निशि बार्ने।
हिम्मतका साथ काम गर्नाले स’त्रु तथा प्र’तिष्पर्धिहरुलाई सजिलै किनारा लगाउन सकिनेछ । सञ्चार तथा मिडिया जस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानि फस्टाएर जानेछ भने नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना कुराहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । साझको समय मध्ययम रहेकोले आफन्त तथा कुटुम्बसँग बि’वाद बढ्ने योग रहेकोछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला।
अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा दिईएको समयबाट भनेजस्तो नतिजा नआउँने हुँदा मन चि’न्तित हुनेछ । सानो कामलाई पनि प्रशस्त समय दिनु पर्दा दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय दिएपनि आम्दानि कम हुनेछ भने उठ्नु पर्ने रकम नउठ्नाले नयाँ काम गर्ने अवसरबाट टरेर जानेछ । साझको समय राम्रो रहेकोले आफन्त तथा दाजुभाईको सहयोग पाईनेछ।
उत्तम बस्त्र,मनपर्ने भोजन तथा बिशेष उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ । बिभिन्न अवसरले पछ्याउँनेछन् भने चाहेको समयमा कामहरु सम्पन्न हुँने हुँदा आफन्तहरु खुसि हुनेछन् । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जाने तथा दाम्पत्य जीवन सुखि रहनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन पाईने हुँनाले सार्वजनिक पद पाउँने योग रहेकोछ । साझको समय मध्ययम रहेकोले कुटु’म्बसँग बिवाद बढ्ने योग रहेकोछ।
आफन्त तथा साथिभाईबाट सुनिने अप्रिय समाचारले मन दुखित तुल्याउँनेछ भने समयमा काम नबन्नाले मान सम्मानमा कमिको महशुष हुनेछ। अन्य काममा ब्यास्त रहनाले पढाई लेखाईमा समय दिन सकिने छैन । साझको समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा लगानि गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आर्थिक कारोबार फस्टाएर जाने तथा दैनिकी सहजै बित्नेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ।
बिद्या तथा प्रतिष्र्धामा बिजय हुँने योग रहेकोछ भने नयाँ ज्ञान हासिल हुनेछ । बुवा वा बुवासरहका मानिसको आषिर्वाद तथा सहयोगले महत्वपुर्ण कामहरु सम्पादन हुनेछन् । माया प्रेममा एक अर्कालाई भेटि सौहार्दपुण बाताबरणमा समय व्यातित गर्न सकिनेछ । ईच्छित कामनाहरु पुरा हुँने तथा आफ्नो मानिसबाट उपाहार तथा भौतिक सामानहरु प्राप्त हुनेछ । साझको समय राम्रो रहेकोले यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला।
कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णको चर्को बि’रोध हुनसक्छ अलि बढि ध्यान दिनुहोला । पढाई लेखाईमा समय दिय पनि सोचेजस्तो नतिजा नआउँने हुँनाले मन खिन्न हुनेछ । परिवार तथा आफन्तजन लाई समय दिन नसक्दा मनमु’टाबको अवस्था सिर्जना हुँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । साझको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ । कृषि क्षेत्रको लगानीबाट भनेजस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ।
पढाई लेखाईमा खर्चिएको समयबाट भनेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेमको गाठो कसिनेछ भने घर परिवार तथा आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तीको योग रहेकोछ भने बिलाशी बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । साभपख गोप्य योजनाहरु सार्वजनिक नगर्नु नै उचित हुनेछ।
भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको कारोबार गर्दा वा प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घ’ट्ना नघ’ट्ला भन्न सकिन्न । शेयर बजारको लगानि बाट भने सन्तोष जनक लाभ हुनेछ । अध्ययनमा मन नजाने हुनाले नतिजा अरुकै पोल्टोमा जानेछ । माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले खासै साथ नदिने हुनाले आजको लिन भेटघाटलाई कम गर्नुनै राम्रो हुनेछ । आफन्त तथा सन्तानबाटनै धोका हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । साझपख समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ।